သိချင်တဲ့ ဗေဒင် အကြောင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Parenting & Pregnancy » သိချင်တဲ့ ဗေဒင် အကြောင်း
သားလေးတစ်ယေက်မွေးဖို့ မလွယ်ပါလား၊ မဒမ်က ဖိအားပေးနေတယ်ဗျို့၊ ခွဲမွေးရမှာဆိုတော့ ဗေဒင်တွေ နက္ခတ်တွေ ရှုပ်လာတာပေါ့။ ကိုယ့်ဟာကိုယ် ဆိုရင်တော့ဒီတိုင်း မွေးပလိုက်တယ်၊ တစ်ခါတစ်လေ တော့ခေါင်းမာလို့ မရဘူးဗျာ၊ ကိုယ်တိုင်လဲ ဗေဒင် မတွက်တတ်၊ မဟာဘုတ်တိုင် တောင် မထူတတ်တော့ ဒွတ်ခ၊ ကိုယ့် ကလေးဆိုတော့ ဟုတ်သော်ရှိ မဟုတ်သော်ရှိ ပေါ့ဗျာ။ ရက်လေးဘာလေး တွက်ြ့ပီး ရွေးရ အုံးမယ်ဗျာ၊ ဇူလိုင် ၁၅ နဲ့ ၂၀ ကြားလို့တော့ ဆရာဝန်က ရက်ကော်မန်း ပေးသဗျို့၊ အဲဒါ ဘယ်နေ့ ဘယ်အချိန် မွေးရမလဲ ကြံရာ မရလို့ ရွာထဲ အကူအညီ တောင်းတာပါဗျာ၊ ကူညီကြအုံးဗျို့၊ ရာသီဖွား(ပုတိ၊ ဘင်က၊ အစရှိသဖြင့် ပေါ့ဗျာ) အဟောတွေ (မြန်မာလိုနော်)ဘုတ်တိုင်ထူတာတွေ ဘယ်ဆိုဒ်မှာ ကြည့်ရမလဲ ။ကိုယ်တိုင်တွက်တတ်ရင်လဲ နည်းနည်းရှဲပါအုံးလို့။ သားလေးမွေးရင် ရွာသူတွေ ယောက္ခမ တော်နိုင်ပါတယ်ဗျာ။ ဟဲဟဲ။။(ကျေးဇူး ကြိုတင်ထားပါတယ်ဗျာ)။
ကဲ ဒါကာ ကိုယ်တော်ဟောပေးပါမယ်
ပွဲ အောင် လံ ထု စစ် သူ ကြီး ပု ဆိုး ပြဲ
ကောင်း ဒါကာ အဆင်ပြေမှာပါ Don’t worry
သမီးလေး မွေးရင်လည်း အားမငယ်ပါနဲ့။
သဂျီးဆီမှာ တန်းစီနေတဲ့ သားမက်လောင်းတွေ အမြန်လာ နေရာယူကြလိမ့်မယ်။
ဒီရွာထဲမှာ ကျုပ်သိသလောက် ..
သူတို့တွေကို မေးကြည့်ပါ …
အကယ်၍ သူတို့ ဒီပို့စ်ကို ဖတ်မိရင်လည်း
ဖြေပေးကြလိမ့်မယ် ထင်မိကြောင်းရယ်ပါ …
ကျုပ်ကတော့ ဘာမှမတတ် ….
ကိုယ်ကမေးမလား လို့ ကိုယ်ကို သူကတပြန် ပြန် မေးနေတာဘဲ
ဒါလေးများ…. သားလေး မွေးရင် ” မန်းလေးချို” လို့ ပေးလိုက်…
သမီးလေးမွေးရင် ” gazette cho” လို့ပေးလိုက်ပေါ့ဟ…
ခွဲမွေးမှာဆိုတော့ ဇူလိုင် ၁၉ရက်နေ့ ခွဲလိုက်ပါ
မွေးဖို့အချိန်ကောင်း တွေကတော့ ဗေဒင်အရ………….
နံနက် ၃း၁၅ ကနေ ၆း၃၀ထိ ကောင်းပါတယ်။
၁၁း၂၀ နောက်ပိုင်းတော့ အတန်သင့်ပေတယ်။
ညနေ ၄း၄၀ကနေ ၇း၃၆ အထိပြန်ပီး ကောင်းမွန်ပါတယ်။
အထက်ပါ အချိန်တွေက ဗေဒင်သဘောအရ ကောင်းပေမဲ့ ခွဲပေးမဲ့ ဆရာဝန်/ဆရာမတွေ အားတဲ့အချိန်က ပိုအကောင်းဆုံးပါဘဲ
ဖြစ်နိူင်ရင်တော့ သူဖာသာ ထွက်လာတဲ့ အချိန်က အကောင်းဆုံးပါဘဲ…….
ကမ္ဘာကျော်ပုဂ္ဂိုလ်တွေ တစ်ယောက်မှ ခွဲမွေးတယ်လို့ မကြားဖူးပါ မြန်မာပြည်မှာဘဲ သောက်ရူးထနေကြတာပါ ဆြာဝံတွေ အကြံအဖန်လဲ ပါတာပေါ့..
မခွဲမဖြစ်ခွဲရမယ် ဆိုရင်တော့ မဆိုလိုပါ… ဒါပေမဲ့ ၁၉၈၉ လောက်အထိ နှလုံးရောဂါသည်လဲ သူ့ဖာသာ ပလွတ်လိုက်တာပါဘဲ
အဲဒါမို့ ကျနော် ကျပ်မပြည့်တာလားတော့မသိ
ကမ္ဘာကျော် ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ဘယ်သူမှ ခွဲ မွေးကြတယ်လို့ မကြားဖူးဘူး ဆိုပြီး ကိုရဲစည် ပြောလို့ တခုလောက် ၀င်ပွားချင်တယ်။
တခါတရံ ကံကြမ္မာတွေက ထူးဆန်းကြတယ်။ ဗေဒင်ဆရာတွေက သိပ်ကောင်းတဲ့ အချိန် နှစ်ပေါင်း ၂၀၀ မှာ မှ ဒီတရက်ပဲ ရမယ် ဒီ တချိန်ပဲ ရမယ် နဲ့ လူထူးလူဆန်းတွေ မွေးဖို့ ကြိုးစားကြတဲ့ မိဘတွေ ရှိတယ်။ တကယ်တမ်း ကလေးရဲ့ ကံက လက်မခံချင်တော့ မွေးမဲ့ အချိန်ထက် ၂ရက်လောက် စောပြီး မဖြစ်မနေ မွေးလိုက်ရတာမျိုး.. တခါတရံမှာ ဆရာဝန်က အရေးတကြီး ကိစ္စ ရှိလို့ မလာနိုင်လို့ အချိန်ကျော်သွားတာ လွဲသွားတာတွေ နဲ့ ကြုံရတာမျိုးတွေ ခဏခဏ ကြားဖူးနေမိတယ်။
ကျနော်က မတွက်တတ်လို့ ပါ။
မင်းသိင်္ခ လဲသေပြီ ရယ်
ရာသီဖွား(ပုတိ၊ ဘင်က၊ အစရှိသဖြင့် ပေါ့ဗျာ) အဟောတွေ (မြန်မာလိုနော်)ဘုတ်တိုင်ထူတာတွေ ဘယ်ဆိုဒ်မှာ ကြည့်ရမလဲ ။မေးထားလို့ ဗေဒင်ဆရာမဟုတ်ပေမယ့် သိသလောက်လေး share ပါ့မည်။
ယခုမြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၇၄ နှစ်ရဲ့ မဟာဘုတ်အရ
သောကြာနေ့မွေးဖွားပါက – အဓိပတိဖွား
တနင်္ဂနွေနေ့မွေးဖွားပါက – အထွန်းဖွား
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မွေးဖွားပါက – သိုက်ဖွား
စနေနေ့မွေးဖွားပါက – ရာဇာဖွား
ကြာသပတေးနေ့မွေးဖွားပါက – မရဏဖွား
တနင်းလာနေ့မွေးဖွားပါက – ဘင်္ဂဖွား
အင်္ဂါနေ့မွေးဖွားပါက – ပုတိဖွား ဖြစ်ပါမယ်။
အကောင်းတွေရွေးပြီးမွေးချင်ရင်တော့ သောကြာနေ့၊တနင်္ဂနွေနေ့၊ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊စနေနေ့ စသည့်(၄)ရက် ထဲက တစ်ရက် ရက်ကိုရွေးပါလို့ဆိုပါတယ်။
သူ့ဇာတာနဲ့ သူလာတာပဲ ကောင်းပါတယ်နော်..
လုပ်ယူလို့ရတဲ့ ဇာတာကတော့ အမှန်မဖြစ်ဘူးထင်တာပဲ …
တနင်္လာနေ့ မွေးသော် ကိုပေ
အင်္ဂါနေ့ မွေးသော် ဆိုးပေ
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ မွေးသော် ဝါးပေ
ကြာသပတေးနေ့ မွေးသော် မောင်ပေ
သောကြာနေ့ မွေးသော် ဟန်ပေ
စနေနေ့ မွေးသော် ထူးပေ
တနင်္ဂနွေနေ့ မွေးသော် အောင်ပေ
အဲ့လို မပေးပါနဲ့ လို့ ။
ကဲ ရွာသားတွေလာကြပါဦး ဘုတ်တိုင်ထူရအောင် ပြီးမှဆက်ဟောမယ်
ရက်စွဲအနေနဲ့ မွေးချင်တယ်ဆိုရင် ဖေဖော်ဝါရီလ ၃၀ ရက်နေ့ရွေးပြီးခွဲမွေး ကမ္ဘာကြီးကို အုပ်စိုးတဲ့လူဖြစ်လိမ့်မယ် အချိန်က ညဉ့် ၈၁ ချက်အတီး အပြီးမွေးရမယ် ဒါဗြဲ
အမှန် ဆိုအနော်ကလဲ သဘာဝအတိုင်း ပဲ ကြိုက်တာပါဗျာ၊ အခုတောင် အလုပ်ရှုပ်ရပြီ လေ၊ သားက ဆိတ်ကြီး တယ် ထင်ပါ့ဗျာ၊ ငုတ်တုတ်ထိုင်နေတော်မူသတဲ့။ မဒမ်ကလည်း မော်ဒယ်က အရှုံး ပေးရမှာဗျို့။ ပိန်လိုက်တာ ဆိုတာ လက် လေးတွေများ ချွန်နေသာ အပ်တွေလားမှတ် ရတယ်၊ ပိုက်ပိုက်က လဲ ပိုကုန်အုံးမယ် ဗျို့။ ကူညီကြတာ ကျေးဇူး ပဲဗျို့။ ဘာပဲပြောပြော အားရှိတယ်ဗျ။